Kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab waxay dhawaan shaacisay in magaaalada Jilib ay ka furtay xarun loogu talo galay ka hortagga faafidda cudurka COVID-19.
Wax faahfaahin oo kasoo baxay furista xaruuntaas iyo inta qof ee lagu hayo ma lahan laakiin waxaa muuqda in Shabaab haatan ay ogaadeen in cudurkaasi halis yahay. Wuxuu ururku isu dayayaa inuu u ekaado mid eegayo danaha shacabka Soomaaliyeed.
Go’aankan cusub waxay kooxda ku shaacisay baraha afkooda ku hadlaan, iyadoo ay u sheegeen dadweynaha inay imaadaan xarunta haddii ay isku arkaan astaamaha cudurka COVID-19.
Waxaase layaab leh in koox laga bartay xasuuqa dadweynaha Soomaaliyeed ay maanta isu ekeysiiso mid eegeyso danaha shacabka. Sida la ogyahay kooxda al-Shabaab howshooda guud waa xasuuqa shacabka Soomaaliyeed. in isla kooxda looga bartay xasuuqa shacabka inay furaan xarun loogaga hortagayo cudur waa arrin aad loola yaabo.
Waxaa loo maleynayaa oo dadka ka faallooda arrimaha amniga ay aaminsan yihiin in kooxda ay raaadineyso taageero siyaasadeed kuwaasoo aysan haysan haatan maaddaama ay dad badan fahmeen ujeeddooda.
Goobaha ay Shabaab ka arrimiso ma lahan waddooyin iyo adeeg bulsho inna ha yaraatee. Waddooyinkii iyo xarumihii caafimaad dhammaan iyaga ayaa burburiyeen. Xarumaha caafimaad ee haatan ka jiraan Soomaaliya intooda badan waa kuwo ay maaamulaan hay’adaha samafalka kuwaasoo had iyo jeerba weerarro kala kulmaan al-Shabaab.
Waxaa intaasi sii dheer in kooxda ay hadda ka hor carqaladeeyeen dadaallada caafimaad ee ka hortagga cudurka faaafa ee COVID-19 oo ay dileen dhakhaatiir ka shaqeynayeen gudaha Soomaaliya.
Waxaa arrin lagu qoslo ah in koox had iyo jeerba daadisa dhiigga shacabka Soomaaliyeed ay maanta dhahaan waxaan fureynaa goob nolosha lagu badbaadiyo.